Carnival na Mediterranean?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Carnival na Mediterranean?
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Carnival bụ otu n'ime ememme kachasị ochie na Malta na Gozo, nke nwere narị afọ ise nke akwụkwọ akụkọ na akụkọ ihe mere eme laghachi na Knights 'nke St John nọ na Malta. Afọ a Carnival Week na Malta na-ewere ọnọdụ na February 21-25, 2020. Ememme ụbọchị ise a bụ ịrụ ụka adịghị ya na otu n’ime ihe omume kachasị mma na kalenda Maltese na Gozitan. Dika ọdịnala bu ụzọ tupu Ndị Kraịst, Carnival na-enye ụbọchị ise oriri na ọniụ withụ na ndị na-eme njem na-eji ejiji mara mma ma na-ekpuchi ihu ha.
Obi nke ihe a na-eme na Valletta, isi obodo Malta, UNESCO World Heritage Site na European Capital nke Omenala 2018. Obi ụtọ ahụ na-amalite site na ngagharị nke oke mmiri na-acha odo odo ma mee ka ọtụtụ ụmụaka na-agbagharị na uwe ndị mara mma. Ememe a na-aga n'ihu na etiti abalị abalị Malta, Paceville, na-ejide ndị na-eme njem abalị na-abanye n'ime klọb na ụlọ mmanya, ka na-eyi uwe ha jọgburu onwe ha.
Agbanyeghị, ndị ọbịa ekwesịghị ileghara ememe ndị mara mma a na-eme n'obodo na obodo dị iche iche na agwaetiti ndị ahụ anya, nke ọ bụla nwere ụdị ememme nke ha. Maka otu nkọwa, ndị na-aga aga na Carnival nwere ike ịga Nadur, Gozo, ebe Carnival na-ewere ọnọdụ na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị.
Carnival nwere njikọ chiri anya na akụkọ ọdịnala Maltese. Emere ya na Malta kemgbe ọbịbịa nke ndị Knights nke St. John na 1530, ụfọdụ ọmụmụ na-edekwa ụbọchị oriri mbụ a na-eme na 1470. Ruo 1751, Carnival bụ ọrụ dị na Valletta, mana nke ahụ abụghị n'ezie ezi taa.
Maka ozi ọzọ pịa ebe a.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, nke dị n’etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi dị oke ịtụnanya nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime saịtị UNESCO ma bụrụ European Isi Obodo nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na ụlọ okwute kachasị ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Ukwu Britain kacha egwu usoro nchebe, ma gunyere ulo oru, okpukpe na agha ndi agha site na mgbe ochie, nke ochie na oge mbu. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na-atọ ụtọ, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Ozi ndị ọzọ banyere Malta.